Nanapa-kevitra Ny Tsy Hiafina Intsony Ny Tovovavy Afrikana Tatsimo Iray Mitondra Ny Tsimok’Aretina VIH · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2017 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, မြန်မာ, Swahili, 日本語, English
Ao Afrika Atsimo no foiben'ny tsimok'aretina VIH eto amin'izao tontolo izao araka ny Avert, izay fikambanana mpanao asa soa miasa amin'ny fisorohana ny fihanaky ny VIH. Roa taona lasa izay, nisy tranga fifindran'ny aretina VIH vaovao miisa 380.000 tao amin'ny firenena, izay efa ahitana mponina voan'ny SIDA miisa 7 tapitrisa. Olona hatramin'ny 180.000 ao Afrika Atsimo no matin'ny aretina SIDA tamin'ny taona 2015 .
Nilaza ny Orina Mpanasoa mikarakara ny SIDA ao Afrika Atsimo fa mihanaka ny VIH ao an-toerana noho ny fahantrana, ny tsy fitoviana, ny korontana ara-tsosialy, ny firaisana ara-nofo tsy voaaro miely patrana, ny satan'ny vehivavy ambany , ny herisetra ara-nofo, ny asa mifindrafindra monina, ny fitsaboana voafetra sy tsy mitovy, ary ny fitantanana ratsy manoloana ny valan'aretina.
Nahita ny fanadihadiana antsoina hoe “Ny Tondro Fanilikilihan'Ireo Olona Miaina miaraka amin'ny VIH Ao Afrika Atsimo,” izay novitain'ny Vaomieran'ny Fikarohana ny Siansan'Olombelona fa miaina fanilikilihana avy amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ny olona iray amin'ny telo miaina miaraka amin'ny VIH ary voahilikilika kokoa mihoatra ny lehilahy ny vehivavy .
HEVITRO: Mihevitra aho fa tokony hatao ambasadaoron'ny # Afrika amin'ny resaka #VIH_SIDA ilay #AfrikanaTatsimo @saidy_brown mba hanao kabary amin'ny sehatra iraisampirenena.
@saidy_brown ianao akia no sampiko !!! Mahatalanjona sy mahery ianao !!! Misaotra anao noho ity anatra momba ny fiainana ity
@saidy_brown namaky ny tantaranao tao amin'ny tranonkala BBC aho .
@saidy_brown raha lasa mitondra ny tsimok'aretina VIH ianao noho ny firaisana ara-nofo, moa ve ianao maherifo tahaka izao ihany?
Miala tsiny aho ry @MMaenza1 fa ahoana moa no fomba hanampian'ny fanontanianao ny olan'ny #VIH manerantany ? Miombon-kevitra amin'i @saidy_brown aho moa maninona izay fomba nahazoana azy?
@Nala_RSA @saidy_brown God bless you ! I think we are trying to let the world know that there is STILL life even in the darkest situations!
@Nala_RSA @saidy_brown Andriamanitra anie hitahy anao! Mihevitra aho fa miezaka isika ny hampahafantatra an'izao tontolo izao fa MBOLA misy ny fahavelomana na dia ao anatin'ny toe-javatra maizina indrindra aza!